Muuse Biixi Madaxweyne Sannad Ku Waayay Kalsoinidi Shacabka – somalilandtoday.com
(SLT-Hargaysa) Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo sannad madaxa ka jarayaa intuu Xukunka hayay ayaa gabi ahaan kal soonidi shacabka lumiyay.
In kasta oo uu ololihi ku galay inuu go’aan adag yeelan doono hadana ficilada uu qaaday intuu xilka haya ayaa noqday midba mid ku ilow, waxaanay shacabku baraha bulshada ku falaynayeen su’aasha ugu badan oo ahayd “Yuu la tashadaa yaase la taliya “?
Bilawgiiba waxay shacabka rer Somaliland qawad simay Mucaarid iyo muxaafid ka muujiyeen Xukuumaddii uu soo dhisay oo ahayd mid ka hosaysa filashadii laga nawilaayay, sidoo Kale Cadaaladda uu wax ku qaybiyay ayaa ahayd mid waali ah oo ka kanaan ummaddu ka muujisay. Marka laysku daro Xilalka uu beeshiisa u magacaabay iyo kuwii magacawnaa ee uu daayay taas oo ummadda Somaliland ee Amalka ka qabay inay helaan Dawlad wanaag ay candhuuftoodi dib u liqeen. Wuxuu aha xogogaal si dhaw ula socday ka caa kufkii Somaliland soo martay iyo wixii khaladaad soo dhacay taas oo la filaayay inay caawin doonto nasiib darro wuu garab maray rajayntaas, isagoo ka doorbiday kasbashada bulshada uu Madaxweynaha u yahay hananka qaybi oo xukun, taas u qaybisay in degaankiisa laga tageero oo ay xitaa ka amuusan siyaasiyiintii dhuunta u galay xukuumadihii kala danbeeyay, halka bulshadii kalena qaylo ooda ka qaadeen.
Isku shaandhayntii uu sameeyay ee u danbaysay ayaa iyana fajac iyo dhabanahays wixii hore ilaw ah ummaddu kaga dareen celisay kadib markii uu noqday Madaxweynihii ugu horreeyay ee Wasaaradda Maaliyadana beeshiisa ugu dara dheeliga ka jiray Xilalkii hore. Geesta kale Madaxtooyada oo ahayd muraayada bulshadu ka dheehato wada lahaanshaha wuxuu ku koobay ilaa Shaqaale Hosaadkii dad ka soo jeeda jufadiisa taas oo dhalisay in siyaasad hoose (Local) ah Dalka lagu hago.
Si kasta oo ay noqotayba wuxuy Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hoos maray xitaa filashadii Dadka aan tageersanayn ka filayeen.